တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ တရုတျကှနျမွူနဈပါတီ ဗဟိုကျောမတီ နိုငျငံရေးဗြူရို အဖှဲ့ဝငျ H.E. Mr. Yang Jiechi ဦးဆောငျသညျ့ ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့အား လကျခံတှဆေုံ့ » ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ
စကျတငျဘာ ၂၊ ၂၀၂၀ စကျတငျဘာ ၂၊ ၂၀၂၀
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ တရုတျကှနျမွူနဈပါတီ ဗဟိုကျောမတီ နိုငျငံရေးဗြူရို အဖှဲ့ဝငျ H.E. Mr. Yang Jiechi ဦးဆောငျသညျ့ ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့အား လကျခံတှဆေုံ့
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ တရုတျ ပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ တရုတျကှနျမွူနဈပါတီ ဗဟိုကျောမတီနိုငျငံရေးဗြူရိုအဖှဲ့ဝငျ H.E.Mr. Yang Jiechi ဦးဆောငျသော ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့အား ယနနေံ့နကျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဇယြောသီရိဗိမာနျဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး) ဒုတိယဗိုလျခြုပျမှူးကွီးစိုးဝငျးနှငျ့ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး တရုတျ ပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ တရုတျကှနျမွူနဈပါတီ ဗဟိုကျောမတီနိုငျငံရေးဗြူရိုအဖှဲ့ဝငျနှငျ့အတူ အဆငျ့မွငျ့အရာရှိကွီးမြားနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ တရုတျသံအမတျကွီး Mr. Chen Hai တို့ တကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့ တှဆေုံ့ရာတှငျ မွနျမာနိုငျငံနှငျ့ တရုတျနိုငျငံတို့သညျ မိတျဆှကေောငျး၊ မိတျဆှေ ဟောငျးနိုငျငံမြားဖွဈကာ ညီအရငျးအဈကိုစိတျဓာတျဖွငျ့ ဆကျဆံရေးတိုးတကျကောငျးမှနျ အောငျဆောငျရှကျလကျြရှိသညျမှာ နှဈပေါငျး(၇၀)ပွညျ့မွောကျပွီဖွဈပွီး ကဏ်ဍပေါငျးစုံတှငျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြား တိုးမွှငျ့လုပျဆောငျသှားမညျ့အခွအေနမြေား၊ ယခုနှဈ ဇနျနဝါရီလ အတှငျး မွနျမာနိုငျငံသို့ လာရောကျခဲ့သညျ့ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ သမ်မတ H.E.Mr. Xi Jinping ၏ ခရီးစဉျတှငျ နှဈဖကျသဘောတူညီခကျြမြားအား ဆကျလကျအကောငျအထညျဖျော ဆောငျရှကျသှားမညျ့အခွအေနမြေား၊ တရုတျနိုငျငံတှငျ COVID-19 ရောဂါစတငျဖွဈပှား သညျ့ကာလအတှငျး မွနျမာ့တပျမတျောမှ တရုတျနိုငျငံသို့ ရောဂါကာကှယျရေးအထောကျ အကူပွုဆေး နှငျ့ဆေးပစ်စညျးမြား လငျြမွနျစှာ ပေးပို့လှူဒါနျးခဲ့သညျ့ အခွအေနမြေားနှငျ့ တရုတျကှနျမွူနဈပါတီနှငျ့ တရုတျပွညျသူ့လှတျမွောကျရေးတပျမတျောမှလညျး ဆေးဘကျ ဆိုငျရာကြှမျးကငျြပညာရှငျမြားစလှေတျ၍ မွနျမာ့တပျမတျောသို့ ရောဂါကာကှယျရေး အထောကျအကူပွု ဆေးနှငျ့ ဆေးပစ်စညျးမြား လှူဒါနျးကာ ရောဂါကာကှယျထိနျးခြုပျကုသရေး ဆိုငျရာမြားနှငျ့ပတျသကျ၍ အမွငျခငျြးဖလှယျဆှေးနှေးနိုငျခဲ့သညျ့အခွအေနမြေား၊ နှဈနိုငျငံ နယျစပျဒသေ လုံခွုံရေး၊ တညျငွိမျအေးခမျြးရေး၊ တရားဥပဒစေိုးမိုးရေးနှငျ့ မူးယဈဆေးဝါး နှိမျနငျးရေးတို့တှငျ တပျမတျောနှဈရပျအကွားသတငျးအခကျြအလကျမြား ဖလှယျကာ အတူတကှ ပူးပေါငျးလကျတှဲဆောငျရှကျသှားရနျနှငျ့ နှဈနိုငျငံနယျစပျဒသေ လုံခွုံရေး တပျဖှဲ့ဝငျမြားအကွားနှငျ့ နယျစပျဒသေစီမံခနျ့ခှဲအုပျခြုပျနသေညျ့အဖှဲ့မြားအကွား အခငျြးခငျြးအပွနျအလှနျ ဆကျသှယျဆောငျရှကျမှုမြား တိုးမွှငျ့ဆောငျရှကျသှားရနျ လိုအပျသညျ့အခွအေနမြေား၊ ပွညျတှငျးလကျနကျကိုငျပဋိပက်ခမြားခြုပျငွိမျးပွီး ထာဝရ ငွိမျးခမျြးရေးရရှိရနျအတှကျ ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျမြား၏ အခွခေံမူဖွဈသညျ့ တဈနိုငျငံ လုံးပဈခတျတိုကျခိုကျမှုရပျစဲရေးသဘောတူစာခြုပျ NCA တှငျ ပါဝငျလကျမှတျရေးထိုးရနျ လိုအပျပွီး ဆကျလကျဆောငျရှကျရမညျ့ ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျမြားတှငျ ပွညျ့ပွညျ့၀၀ ပါဝငျလြှောကျလှမျးရနျလိုအပျသညျ့ အခွအေနမြေား၊ တပျမတျောအနဖွေငျ့ COVID-19 ရောဂါကာကှယျထိနျးခြုပျရေးလုပျငနျးမြား ပိုမိုထိရောကျလငျြမွနျစှာဆောငျရှကျနိုငျရေး၊ ပဈခတျတိုကျခိုကျမှုရပျစဲရေးနှငျ့ ထာဝရငွိမျးခမျြးရေးအတှကျ နိုငျငံတျောမှ အကွမျးဖကျဟု သတျမှတျကွညောထားသော အကွမျးဖကျအဖှဲ့အစညျးမြားရှိသညျ့ နရောမြားမှအပ ကနျြနရောမြားတှငျ စကျတငျဘာလ ၃၀ ရကျအထိ စဈရေးဆိုငျရာ လှုပျရှားမှုမြားကို ရပျဆိုငျးပေးထားသညျ့ အခွအေနမြေား၊ ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ၊ နိုဝငျဘာ ၈ ရကျတှငျ ကငျြးပပွုလုပျမညျ့ ပါတီစုံဒီမိုကရစေီရှေးကောကျပှဲ အောငျမွငျစှာကငျြးပနိုငျရေးနှငျ့ လှတျလပျ၍တရားမြှတသညျ့ ရှေးကောကျပှဲဖွဈရနျ လိုအပျသညျ့အခွအေနမြေား၊ နှဈနိုငျငံ ဆှမြေိုးပေါကျဖျောခဈြကွညျရငျးနှီးမှု ပိုမိုတိုးတကျခိုငျမာစရေေးအတှကျ အေးအတူပူအမြှ ဖွဈသညျ့ အသိုကျအဝနျးထူထောငျရနျနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြား အရှိနျအဟုနျမွှငျ့တငျ ဆောငျရှကျသှားမညျ့အခွအေနမြေားအား ခငျမငျရငျးနှီးစှာ ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ ဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ တရုတျကှနျမွူနဈပါတီဗဟို ကျောမတီနိုငျငံရေးဗြူရိုအဖှဲ့ဝငျ H.E.Mr. Yang Jiechi တို့သညျ အမှတျတရလကျဆောငျ ပစ်စညျးမြား အပွနျအလှနျပေးအပျခဲ့ကွသညျ။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ နိုင်ငံရေးဗျူရို အဖွဲ့ဝင် H.E. Mr. Yang Jiechi ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ စက်တင်ဘာ – ၂
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် တရုတ် ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီနိုင်ငံရေးဗျူရိုအဖွဲ့ဝင် H.E.Mr. Yang Jiechi ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဇေယျာသီရိဗိမာန်ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစိုးဝင်းနှင့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး တရုတ် ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီနိုင်ငံရေးဗျူရိုအဖွဲ့ဝင်နှင့်အတူ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီး Mr. Chen Hai တို့ တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့သည် မိတ်ဆွေကောင်း၊ မိတ်ဆွေ ဟောင်းနိုင်ငံများဖြစ်ကာ ညီအရင်းအစ်ကိုစိတ်ဓာတ်ဖြင့် ဆက်ဆံရေးတိုးတက်ကောင်းမွန် အောင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်မှာ နှစ်ပေါင်း(၇၀)ပြည့်မြောက်ပြီဖြစ်ပြီး ကဏ္ဍပေါင်းစုံတွင် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများ တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်သွားမည့်အခြေအနေများ၊ ယခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ခဲ့သည့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတ H.E.Mr. Xi Jinping ၏ ခရီးစဉ်တွင် နှစ်ဖက်သဘောတူညီချက်များအား ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည့်အခြေအနေများ၊ တရုတ်နိုင်ငံတွင် COVID-19 ရောဂါစတင်ဖြစ်ပွား သည့်ကာလအတွင်း မြန်မာ့တပ်မတော်မှ တရုတ်နိုင်ငံသို့ ရောဂါကာကွယ်ရေးအထောက် အကူပြုဆေး နှင့်ဆေးပစ္စည်းများ လျင်မြန်စွာ ပေးပို့လှူဒါန်းခဲ့သည့် အခြေအနေများနှင့် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့် တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မှလည်း ဆေးဘက် ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များစေလွှတ်၍ မြန်မာ့တပ်မတော်သို့ ရောဂါကာကွယ်ရေး အထောက်အကူပြု ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းများ လှူဒါန်းကာ ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေး ဆိုင်ရာများနှင့်ပတ်သက်၍ အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့သည့်အခြေအနေများ၊ နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ဒေသ လုံခြုံရေး၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါး နှိမ်နင်းရေးတို့တွင် တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြားသတင်းအချက်အလက်များ ဖလှယ်ကာ အတူတကွ ပူးပေါင်းလက်တွဲဆောင်ရွက်သွားရန်နှင့် နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များအကြားနှင့် နယ်စပ်ဒေသစီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်နေသည့်အဖွဲ့များအကြား အချင်းချင်းအပြန်အလှန် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုများ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်သွားရန် လိုအပ်သည့်အခြေအနေများ၊ ပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများချုပ်ငြိမ်းပြီး ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ၏ အခြေခံမူဖြစ်သည့် တစ်နိုင်ငံ လုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA တွင် ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးရန် လိုအပ်ပြီး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပြည့်ပြည့်၀၀ ပါဝင်လျှောက်လှမ်းရန်လိုအပ်သည့် အခြေအနေများ၊ တပ်မတော်အနေဖြင့် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမိုထိရောက်လျင်မြန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေး၊ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးနှင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် နိုင်ငံတော်မှ အကြမ်းဖက်ဟု သတ်မှတ်ကြေညာထားသော အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများရှိသည့် နေရာများမှအပ ကျန်နေရာများတွင် စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်အထိ စစ်ရေးဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများကို ရပ်ဆိုင်းပေးထားသည့် အခြေအနေများ၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲ အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေးနှင့် လွတ်လပ်၍တရားမျှတသည့် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ရန် လိုအပ်သည့်အခြေအနေများ၊ နှစ်နိုင်ငံ ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု ပိုမိုတိုးတက်ခိုင်မာစေရေးအတွက် အေးအတူပူအမျှ ဖြစ်သည့် အသိုက်အဝန်းထူထောင်ရန်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်သွားမည့်အခြေအနေများအား ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီဗဟို ကော်မတီနိုင်ငံရေးဗျူရိုအဖွဲ့ဝင် H.E.Mr. Yang Jiechi တို့သည် အမှတ်တရလက်ဆောင် ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန်ပေးအပ်ခဲ့ကြသည်။